Fieldwork အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက် [Genbers] အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအလုပ်
အလုပ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကို Earthwork Words ဖြင့်ရှာဖွေပါ
အခြေအနေချိန်ညှိခြင်း earth [မြေထုခြင်း]
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အထွေထွေကန်ထရိုက်တာနေရာတွင်ငြမ်းနှင့်သံမဏိကိုယ်ထည်ဆောက်လုပ်ရေးကိုဆောက်လုပ်နေသည်။၎င်းသည်မြေပုံပေါ်တွင်ကျန်ရှိနေသည့်အလုပ်ဖြစ်သည်။ the ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက် ၀ မ်းမြောက်ခြင်းအတွက်ပိုက်ဆံရှိပါသည်။ငါကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲချင်တယ်ငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲချင်တယ်လှုံ့ဆော်မှုခံရသောလူကြိုဆိုကြသည်! employees ၀ န်ထမ်းများ၏လွတ်လပ်မှုကိုလွတ်လပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းယဉ်ကျေးမှုဖြင့်လေးစားရမည်။ hand ကျွန်ုပ်လက်ထဲမှာအလုပ်တစ်ခုရချင်တယ်။ အရည်အချင်းပြည့်မှီချင်တယ်။ ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုအပြည့်အဝပေးချေမှုဖြင့်သင်တို့ကိုငါကူညီမည်။
★ Excellent ကတည်ငြိမ်မှု!အမြင့်ဆုံးထိန်းသိမ်းထားမှုနှုန်း★★လူငယ်များနှင့်စစ်ပြန်များသည်တက်ကြွသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်နိုင်သည့်နေရာများစွာရှိသည်။ခိုင်မာသော ၀ င်ငွေကိုသင်ရရှိလိုပါသလား၊ အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်ကာယခုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါသလော။ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းရဲ့စွမ်းအားကိုငါတို့ကုမ္ပဏီမှာပြပါ။အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြင်နာစွာနှင့်ယဉ်ကျေးစွာသင်ကြားပေးလိမ့်မည်။
(၁) အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး လျှင်နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၆၀၀၀ ယန်း ~ (၂) အလုပ်သင်နေ့စဉ်လုပ်အားခ ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ အတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ ဦး စားပေးကုသမှု * ၁၀ ရက်ပေးချေခြင်းသို့မဟုတ်လစဉ်ငွေပေးချေခြင်း
Kawaguchi ကိုဗဟိုပြုသည့်တိုကျိုရပ်ကွက် ၂၃ ခု * တိုက်ရိုက် / တိုက်ရိုက်ပြန်ပို့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်
Asakura Gumi Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Tobi လက်မှုပညာ - အတွေ့အကြုံနည်းပါးစုဆောင်းမှု! (ကန်ထရိုက်တာတစ်ချိန်တည်းတွင်မာစတာတစ် ဦး ကိုစုဆောင်းသည်!) သင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၏ထိပ်ဆုံးသို့ ဦး တည်ချင်ပါသလား။
inex သင်ကအတွေ့အကြုံနည်းပါးသော်လည်းပင် Tobi ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လာရန်ခွင့်ပြုသည့် system ပညာရေးစနစ်◎ Tobi ပညာရှင်အရည်အချင်းများကို ၀ ယ်ယူခြင်းအားဖြင့်သင်၏အလုပ်အကိုင်ကိုလွတ်လပ်စွာတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ ရှေ့ကိုခြေလှမ်းလှမ်းဖို့လား
Tobi လက်သမား, Tobi အလုပ်သင်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ
၁။ အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်းအတွေ့အကြုံရှိသူ - ၁၅၀၀၀ ယန်း / တစ်နေ့လျှင် ~ အတွေ့အကြုံမရှိသူ - ၁၂၀၀၀ ယန်း / တစ်နေ့ ~ စတင်မည်။သင်၏စွမ်းရည်နှင့်စွမ်းရည်အရမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့လစာကိုမြှင့်တင်ပါမည်။ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သည် ...
3-5-11-2 Kasumi, Narashino City, Chiba Prefecture * ဤ site သည်အဓိကအားဖြင့် Chiba စီရင်စုနှင့်တိုကျိုတို့တွင်ဖြစ်သည်။
Kataoka Gumi Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
★☆ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလဲ။ဘယ်လိုအလုပ်ခွင်မျိုးလဲငါစိုးရိမ်တယ်! ★★★သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်အလွန်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိကြသည်။ ပွင့်လင်းသောလုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသည်။ လူတိုင်းတွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များပြည့်နှက်နေသည်ဟုလူတိုင်းယူဆကြသည်။အားလုံးသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏မျက်လုံးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်တွေ့ကြုံခံစားပါ။ဒီမှာပါကအေးမြ!မင်းလုပ်လို့ရလား !!ဒါပေမယ့်ကိစ္စမရှိပါဘူးသင်၏အရေးကြီးသောဘဝကိုထောက်ပံ့သောအလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နေခြင်းကြောင့်သတိထားပါ။ Bus ★အလုပ်များပြီးကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်★။အလုပ်အတွက်အားလပ်ချိန်မရှိပါ ★☆ဤသည်မှာတည်ငြိမ်သောအလုပ်ခွင်၌တစ်သက်တာအတွက်သင်၏လက်၌အလုပ်တစ်ခုရရန်သင့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။သငျသညျအတွေ့အကြုံမရှိရင်တောင်, "လှုံ့ဆျောမှု" နှင့် "စိတ်အားထက်သန်" သူမြားကြှနျုပျတို့သညျအစအ ဦး ကနေ back up လိမ့်မည်။ယခုမှစ။ "လက်၌အလုပ်" အရေးကြီးသောအချိန်ကာလတစ်ခုပါ!ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, "အလုပ်လွယ်ကူခြင်း" ကြီးမားတဲ့အချက်ပါ!၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု◎၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးသက်သေပြနိုင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည်ရိုးသား။ စိတ်ချရသောအလုပ်အတွက်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ရေးမှတစ်ဆင့်လူသိများသည်။
Yoshikawa Gumi Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Ganba သည်အခြားသူများထက်အနည်းငယ်ပိုနည်းပြီးအခြားသူများထက် ပို၍ "ဝင်ငွေ" ☆
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်“ မြေကြီးလုပ်ငန်း” သည်“ ဟီဂျကာတာ” ဟောင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင်ခက်ခဲသောအလုပ်မျှသာမဟုတ်၊ နောက်ဆုံးတွင်“ ကျွမ်းကျင်သောအလုပ်မျိုးစုံ” (* ရိုးရှင်းသောပုံသဏ္,ာန်၊ သစ်သားခင်း၊ အလုပ်ခင်းခြင်းမှ) ပလတ်စတစ်သမားအဖြစ်, အားဖြည့်အလုပ်များစသည်) အလုပ်နေရာအမျိုးမျိုးတွင်အလုပ်မျိုးစုံရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စွမ်းရည်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့်နက်ရှိုင်းစွာပြန်ပြောင်းနိုင်သည်။အကယ်၍ သင်သည်ပြည့်စုံသောလက်မှုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လာပါကသင်သွားလေရာရာ၌အခြားသူများထက်ပိုပြီး ၀ င်ငွေရနိုင်သောလက်မှုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်သည်။
[နေ့စဉ်လစာ] ယန်း ၁၁၀၀၀ မှ ၁၄၀၀၀ ယန်း * ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းကာလ (၃ လ) ဖြစ်လျှင်နေ့စဉ်လစာ→အတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ ကာလကိုတိုစေနိုင်သည်။
[ရုံး] ၂-၁၇-၄၂ နီအိုကူရာ၊ ဝကတိုမြို့၊ ဆိုင်တာမာစီရင်စု * အဓိကနေရာများမှာအဆာကာ၊ ရှီကီ၊ နီဇီယာနှင့်ဝါကိုတို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် Saitama City လည်းရှိသည်။
သင်၌အထွေထွေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ မြေကြီးလုပ်ငန်း၊ အခြေခံအုတ်မြစ်စသည်တို့တွင်အတွေ့အကြုံမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ခိုင်မာသောပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးစနစ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ လျှောက်ထားပါ။အတွေ့အကြုံရှိသောလူများကို ဦး စားပေးကုသမှုပေးလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ လျှောက်ထားပါ။
Tobi Chiba Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
★☆★အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု၊ အတွေ့အကြုံမရှိသူ (အလုပ်သင်) ကြိုဆိုသည်။ ★☆★☆★ကွန်ကရစ်တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအတွေ့အကြုံရှိသောယာဉ်မောင်းများအတွက် ဦး စားပေးကုသမှု☆★★☆သင့်တွင်သာမန်လိုင်စင်၊ အလတ်စားသို့မဟုတ်ပိုကြီးသောကားရှိပါကကြိုဆိုပါ၏★ are သင်ကအတွေ့အကြုံနည်းပါးလျှင်ပင်၊ သင်သည်ဤအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!နှစ်ပေါင်းများစွာအကြွေးနှင့်အောင်မြင်မှုများဖြင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်သည်ကောင်းမွန်ပြီးသူသည်နေ့တိုင်းအလုပ်များနေသည်။အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောသူများကိုရှာဖွေပါ။ (^^ personality ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအထူးအလေးပေးခြင်း♪ကျေးဇူးပြုပြီးကောင်းသောဆက်ဆံရေးနှင့်လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်ပါ။ သင်သည်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ပင်လစဉ်လစာယန်း ၂၅၀,၀၀၀ ကိုစတင်ပါ။ >> အတွေ့အကြုံရရှိခြင်းဖြင့်သင်ပိုမိုဝင်ငွေရရှိနိုင်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံရှိသူများသည်တက်ကြွသောအခန်းကဏ္immediatelyကိုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
Yasuda Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Chiyoda Giken Co. , Ltd.
[မြေပြင်တိုးတက်မှု] အခြေခံအဆောက်အအုံထိန်းသိမ်းခြင်း ၀ န်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်း (မြေယာပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်မှု / စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း) ကုမ္ပဏီသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းပညာ၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီးထိုအချိန်တွင်ပင်“ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ၀ င်ငွေမြင့်မားမှု” ကိုနားလည်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
▼ပညာရေးနောက်ခံနှင့်ကျားမအရေးမကြီးပါ။အတွေ့အကြုံမလိုအပ်ပါ။သင့်တွင်ကွက်လပ် (သို့) အလုပ်အပြောင်းအလဲမည်မျှပင်အရေးပါပါစေ!သင်လိုအပ်သမျှသည်သာမန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (အလယ်အလတ်တန်းမောင်းသူများကို ဦး စားပေးကုသမှု) ဖြစ်သည်။ ▼ငါတို့သည်သင်တို့ထင်သည်ထက်ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေများကမ်းလှမ်းပါလိမ့်မယ်!အခြားမည်သည့်ကုသမှုအတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ငါတို့သည်သင်တို့၏လျှောက်လွှာကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။
▼အခြေခံအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (မြေယာပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်မှု / စစ်တမ်း)
▼လစဉ်လစာယန်း ၂၅၀,၀၀၀ မှ ၄၀၀,၀၀၀ အထိရှိသောလစာလစာ * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအရမင်းလစာကိုဘယ်အချိန်မဆိုမြှင့်မယ်။ ――― နှစ်စဉ် ၀ င်ငွေနမူနာ In [အတွေ့အကြုံ မရှိ၍ ကုမ္ပဏီသို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ဒုတိယနှစ်] ၄၀ ...
Misato City, Saitama စီရင်စု
▼တိုကျို၊ ကန်တိုဒေသရှိအဓိကနေရာများ၊ အဓိကအားဖြင့် Saitama စီရင်စုရှိ * Saitama စီရင်စု၊ Misato City ရှိဌာနခွဲရုံးတွင်စုရုံးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ site သို့ပြောင်းရွှေ့ပါမည်။
Chiyoda Giken Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ